Antony efatra mahatonga ny iPad vaovao hihamafana | Vaovao IPhone
Eny, ilay iPad vaovao dia mafana noho ny teo aloha, fa misy antony dimy voalohany mahatonga an'izany ary tsy inona koa izany tokony hanahy isika:
Fanapahan-kevitra bebe kokoa = LED bebe kokoa hanazava ny efijery, noho izany dia miteraka hafanana bebe kokoa.
Mihoatra ny avo roa heny ny herin'ny sary dia midika fa ny hafanana bebe kokoa koa dia ateraky ny fananana transistors betsaka kokoa.
Ny batterie dia manangona fahafaha-manao bebe kokoa ary miala haingana kokoa, noho izany dia hafanana be kokoa no vokarina.
Teknolojia LCD nentim-paharazana: ny rafitra IGZO an'i Sharp dia tsy tonga ara-potoana ary ny iPad vaovao dia tsy nitondra azy, noho izany dia tsy dia mahomby ilay efijery.
Rariny ary Tsy tokony hadinointsika fa vidiny aloantsika izy io noho ny efijery super izay entiny. Izay tsy tia azy dia manana iPad 2 amin'ny vidiny 399 euro, vidiny lafo.
Loharano | CNET
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Antony efatra mahatonga ny iPad vaovao hihombo hafanana
Ignus dia hoy izy:
Ny zava-misy dia tokony ho efa hitan'ny tompon'andraikitra tao Cupertino mialoha izany toe-javatra izany, saingy satria aleon'izy ireo mangina tanteraka momba izany dia reraka aho fa tsy dia liana firy amin'ny hevitsika i Apple, tsy miraharaha afa-tsy ny marketing ny fitaovan'izy ireo izy ireo. … ..
Mamaly an'i Ignus
HH dia hoy izy:
Azo antoka fa io no fidirana farany novakiako tao amin'ity bilaogy ity. "Izay tsy tia an'io dia manana ny iPad 2 amin'ny vidiny 399 euro, vidiny lafo."… Karazana fehin-kevitra fanboy-fanboy inona ho an'ny lahatsoratra iray izay heverina ho mampahalala?
Ny Phoenix Wright dia efa milalao mpisolovava, ary raha mividy vokatra (tsy izany no izy) ary misy zavatra tsy maharesy lahatra ahy dia mitaraina aho mandra-pahatongan'ny vaky. Ary raha tsy hividy an'io vokatra io aho ary tsy tiako ny momba azy dia hihiaka avy eny ambony tafon-trano koa aho. Ary eo raha izany raha, iza no tsy mankasitraka ny hevitro manodikodina azy ... Izay vakinao.
Valiny amin'i HH
HHK dia hoy izy:
"Izay tsy mankasitraka ny hevitro dia alao izy"
tokony hampihatra ny tantara ianao fa tsy handrahona amin'ny bilaogy
Valiny amin'i HHK
Raha tsy fantatrao hoe inona ny esoesoeso manamafy ny voalaza etsy ambony, tsy olako io, ary… Fandrahonana? Na izany na tsy izany xD
Inde Andrefana dia hoy izy:
Manaiky tanteraka, mampalahelo izany.
Valiny amin'i Antilles
Alberto1992 dia hoy izy:
Mampihomehy ahy ity fizarana faha-4 ity izay antony mahatonga ny ipad vaovao lasa mafana be, MIATSY ny Apple be loatra ary efa manao fitaovana falifaly izy ireo amin'ny fepetra raha toa ka tsy mahomby ny iphone 4 ny bokotra an-trano raha ny 4s dia miteny izany raha ny ipad 2 ny efijery zara raha misy kalitao, fa raha miakatra ny ipad 3 dia tsy inona izany fa ny fialantsiny ho an'ny ipad 3 miakatra satria banga satria nataoko mba hahazoana vola fotsiny sy toy ny fitaovana nesorina somary maivana. tsy notsapaina akory tamin'ny toe-javatra izay jo .. izaho no tadiaviko dia fitaovana hivezivezena ary ny hafa tsy baomba radioaktifa ao an-tranoko ... andao hojerentsika raha toa ka manao zavatra tsara tompokolahy isika / toy ny
Mamaly an'i Alberto1992
Torcuator dia hoy izy:
Eny, taorian'ny fanarahana ny forum ofisialy paoma nandritra ny 2 andro izay niresahan'izy ireo ny momba ny hafanana be loatra an'ny ipad 3, amin'ny farany androany dia nandeha tamin'ny ipad 2 aho, ary faly be fa miaraka aminy aho. Ny olana dia tsy hoe lasa mafana kokoa noho ny 2 fotsiny izy, fa be dia be ny olona milaza fa mafana be ka lasa TSY TAHAKA mihazona ny tànana havia, ka rehefa amboarin'izy ireo dia hovidiko ilay vaovao avy eto.fa firy volana.
Mamaly an'i Torcuator
Chicote Chicote dia hoy izy:
Tsy manam-pahaizana momba ny efijery finday aho, fa:
- Ny famahana bebe kokoa dia tsy midika hoe LED bebe kokoa hanazava. Ny efijery LCD dia mampiasa jiro aoriana hiasa. Ireo mahazatra (CCFL) dia mampiasa jiro iray hanatanterahana izany. Avy eo dia tonga ny LED Dimming eo an-toerana sy ny LED LED (ireo no ampiasain'ny TV, tablette ary solosaina finday rehetra). Ny jiro aoriana dia tsy misy ifandraisany amin'ny fanapahan-kevitra, ary noho izany dia tsy misy ifandraisany amin'ny fitomboan'ny fihinanana. Azonao atao ny manana takelaka misy famahana 640 × 480, jiro CCFL ary handany in-droa mihoatra ny New iPad.
- Batterie (tsy maninona ny habe), rehefa mi-charge dia normal raha mafana kely izy fa manala ve? Ara-dalàna izany amin'ny CPU, GPU, sns ... fa ny bateria?
- Ny teknolojia IGZO, marina fa mampanantena izy fa hahomby bebe kokoa (miaraka amin'ny LED tara-pahazavana vitsy kokoa, hahatratra ny fitoviana mitovy na lehibe kokoa), ary amin'ny ilana LEDs vitsy kokoa, mamokatra hafanana kely kokoa. Saingy, ny rafitra ankehitriny an'ny iPad iPad dia mitovy amin'ny an'ny iPad 2, noho izany tsy fialan-tsiny amin'ny hafanana izany.
Heveriko fa tsy fialan-tsasatra hiarovana ny tsy azo ovaina ireo. Heveriko fa ny antony tokana mahatonga an'io hafanana be loatra dia noho ny GPU bibidia napetrak'izy ireo sy ny puce LTE, izay toa mandany be. Izany hoe, ny olana dia ny tsy fanatsarana tsara ireo chips ireo. Tsy misy intsony tsy latsa-danja.
Vahaolana: midina ambanin'ny 45 nm hananganana ireo puce. Izany hoe: ny fahefana sary indroa dia tsy midika hoe hafanana bebe kokoa raha hatsangana araka ny tokony ho izy ny zavatra.
Mamaly an'i Chicote Chicote
Fido dia hoy izy:
Saingy, tsy azoko ny fomba niarovanao be loatra an'i Apple amin'ity pejy ity, ho an'ny rakitsoratra hoe manana iPad 2 sy iPhone 4 aho, saingy tsy olona adala aho ary raha nanakorontana zavatra maro izy ireo dia tokony hiaiky isika. ary aza miala tsiny amin'ny fotoana rehetra Ho an'ny rakitsoratra dia mpamaky anao aho fa tsy tiako izany freaks be izany ianao
Valiny tamin'i Fido
Tranga bateria ho an'ny iPhone 4 na 4S anao